Wenger oo sharaxay sababta ay Man United ugu guuleysanin hanashada Horyaalka Premier League – Gool FM
(England) 12 Sebt 2019. Macalinkii hore kooxda Arsenal ee Arsène Wenger ayaa hadlay sababaha kahor taagan kooxda Manchester United inay u tartanto hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2019-2020.
Arsène Wenger ayaa xaqiijiyay in shaxda kooxda ay haatan heysato Red Devils ay ka maqan tahay qaan gaarnimada loogna baahan yahay iney heystaan, si ay ugu tartamaan hanashada Horyaalka Ingariiska, inkastoo ciyaartoyda Ole Gunnar Solskjær ay leeyihiin awood wanaagsan.
Manchester United ayaa loo caleemo saaray ku guuleysiga horyaalka Premier League 20 jeer taariikhda, laakiin ma aysan ku guuleysanin tan iyo xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay Sir Alex Ferguson ee 2012-2013, iyadoo ay soo wajahday natiijo xumi tan iyo xilligaas.
Arsène Wenger ayaa u sheegay shabakada caanka ah ee beIN SPORTS:
“Manchester United waxay leedahay awood, laakiin ma aysan helin wado ay ugu ciyaari karaan si wadajir ah ilaa iyo haatan”.
“Ciyaartoydan ayaa laga yaabaa inaysan wali u qaan gaarin heer ay u ciyaaraan kooxda sida Manchester United oo kale ah”.
“Malaha tani waa calaamad su’aal weyn sidaas darteed waxaad dareemeysaa inaysan jirin wax diyaar ah, markaad daawato iyaga oo ciyaaraya, waxaad dareemeysaa inaysan u tartami Karin hanashada horyaalka, miyeey awoodaan inay ku celiyaan wixii ay sameeyeen xiddigha Giggs, Scholes iyo Beckham dhowr sano?, aniga ahaan kuma qanacsani”.